Moto G4: famakafakana sy hevitra aorian'ny fampiasana iray volana | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Lenovo, Motorola, hevitra
Ny taranaka fahefatra amin'ny fianakaviana Moto G efa eto io. Gaga i Motorola tamin'ny vaovao Moto G4 sy Moto G4 Plus noho ny antony maro: ny efijery lehibe kokoa sy ilay kinova premium misy fakan-tsarimihetsika.
Mety ve i Lenovo amin'ireo fanovana ireo? Aorian'ny fampiasana iray volana dia mitondra anao feno aho famakafakana video an'ny Moto G4 Ary afaka miteny aho fa, raha te-hiantoka ny fitifirana ianao amin'ny alàlan'ny fividianana elanelam-potoana tsy handiso fanantenana anao, ny telefaona Motorola vaovao no safidy tsara indrindra.
1 Ny Moto vaovao avy amin'ny fianakavian'i Lenovo, miaraka amin'ny Moto G4 sy Moto G4 ho toy ny sora-baventy, te-hiady amin'ny tsena antonony ambony
2 Volavola iray manaraka ny tsipika naterak'ireo teo alohany
4 Fampisehoana mifanaraka amin'ny marika
5 Bateria novaina tsara indrindra miaraka amin'ny rafitra famahana haingana
6 Moto UI, ilay interface tonga lafatra
7.1 Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Moto G4
8 Fehiny farany
Ny Moto vaovao avy amin'ny fianakavian'i Lenovo, miaraka amin'ny Moto G4 sy Moto G4 ho toy ny sora-baventy, te-hiady amin'ny tsena antonony ambony
Ny Moto G voalohany dia nanamarika ny teo aloha sy aorian'io sehatra io, tamin'ny famoronana finday finday avo lenta vaovao miaraka amin'ny lafin-javatra tsara sy ny vidiny tena manintona. Rehefa nandeha ny fotoana dia nihamaro ny mpamokatra nitsambikina tamin'ny famolavolana ny elanelam-potoana vaovao avo lenta izay manjaka amin'ny tsena, manolotra andalana telefaona finday tena feno miaraka amin'ny vidin'ny knockdown, tsy mihoatra ny sakana ara-psikolojika 300 euro.
Ny vaovao Moto G4 dia mikendry ny ho safidy voalohany indray rehefa mitady telefaona Android tsara amin'ny resaka sandan'ny vola. Ny fanomezan-dàlana azy dia manondro fa ny Motorola / Lenovo dia mahazo ny findainy vaovao indray, na dia misy chiaroscuro aza.
Amin'ny lafiny iray dia manana ny haben'ny efijery amin'ny tsipika Moto G4 isika, izay mitombo hatramin'ny 5.5 santimetatra ary afaka mahafeno fepetra ho phablet. Marina fa mitodika mankany amin'ny efijery lehibe ny tsena, saingy ity hetsiky ny Lenovo ity dia miteraka mpampiasa finday marobe manana efijery 5 santimetatra farafahakeliny, ary izay nisafidy ny làlan'ny Moto G teo aloha, mitady vahaolana avy amin'ireo mpamokatra hafa .
Izaho manokana tsy mampaninona an'izany Ampitomboina ny habenyIzy ireo aza dia manao ny Moto G4 ho safidy mahaliana kokoa raha mitady telefaona voalohany ho an'ny zaza 13-17 taona ianao, izay aleony efijery lehibe toy ny terminal izay azo ampiasaina amin'ny tanana iray. Fa ny olan'ny fanoherana rano dia tena tsy azoko.
Ary, na dia ny maodely teo aloha aza dia nisy fanamarinana IPX izay nanome ny fanoherana Moto G ny vovoka sy ny rano, ilay vaovao Moto G4 ihany no manana fanoherana splash sy spill. Misy olona izay mety mihevitra azy ho mahasoa kokoa na finday fa mety ho lena tsy misy olana, fa efa nolazaiko anao ihany fa rehefa nanana ilay maodely teo aloha ianao ary manana an'io endri-javatra io dia tsy tianao ny tsy ananan'ny telefaona vaovao izany.
Ny Moto G4 dia mitazona a endrika mitovy amin'ny modely teo aloha, mitazona ny plastika ho protagonist mazava ary manolotra tsipika kilasika tsy misy risika rehefa mampiseho endrika vaovao.
Mazava fa ny vinavinan'i Lenovo lehibe indrindra dia ny hitazomana ny vidiny ambany araka izay tratra mba tsy hiakatra ny vidin'ny famokarana. Marina fa ny mpanamboatra sinoa hafa dia manomboka manolotra fantsona misy famaranana metaly amin'ny vidiny mitovy, ny Honor 5X dia ohatra mazava, Ka io ho ahy no teboka malemy indrindra amin'ny Moto G4.
Fantatro fa ny famaranana dia tsy teboka mamaritra ho an'ny mpampiasa maro, ireo izay tsy miraharaha an'io antsipiriany io dia tsy hiraharaha izany ny Moto G4 dia tsy manana vatana aluminium. Ho fanampin'izany, na dia tsy misy vy aza, ny famaranana azy dia tena tsara, indrindra ny fonony aoriana amin'ny Moto G4 izay manana rafitra misy teboka bitika miaraka amina fikitihana malefaka sy mahafinaritra.
Ny endriny plastika voadio miaraka amin'io endrika metaly io dia manala ny ampahany amin'ny fahatsapan'ny telefaona plastika. Ankoatr'izay, ny vatana amin'ny ankapobeny manohitra tsara ny filalaovana isan'andro. Nandritra ny iray volana no nampiasako azy nefa tsy nisy karazana tranga fiarovana ary nitazona tsara ny telefaona.
Antenaina fa ny sariny miaraka amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass dia hahatanty ny ratra indraindray, saingy gaga aho nahita fa tsy nijaly tamin'ny finday na nitafy ny telefaona aorian'ny fampiasana isan'andro.
Ny eo alohany dia manana zana-kazo kely kely, azon'izy ireo natao ny nanandrana nanangona toerana kely kokoa. Misy antsipiriany mahaliana miaraka amin'ny mpandahateny eo aloha nitazona ny Moto G4 ny ekipa mpamorona Motorola. Tiako ny afaka milalao lalao nefa tsy mampiditra ny output audio in-telo.
Ny lamosina dia toa kanto tokoa amin'ny masony, miaraka amin'ny logo Motorola eo ambanin'ny fakantsary, ary ny mikasika azy noho izany famaranana mikraoba izay nolazaiko teo. Ankoatr'izay, ny fonony aoriana, izay azo esorina, dia manana fiarovana izay mahatohitra ny tasy. Eto no ahitantsika ny slot karatra SIM micro roa toy ny slot microSD card. Ratsy loatra ny bateria tsy azo esorina.
Su frame izay maka tahaka ny aliminioma dia manolotra fikitika tsara ihany koa. Eo amin'ny ilany ankavanana dia misy ny fanalahidy fanaraha-maso ny volume sy ny bokotra on / off an'ny terminal. Ity farany dia toa vita tamin'ny vy ary manolotra fahamendrehana izay mampiavaka azy amin'ny fifehezana ny volume.
Tiako manokana ilay fahatsapana fahamendrehana ao amin'ny Moto G4. Ny terminal dia miorina tsara ary koa maivana be, 155 grama fotsiny ny lanjany. Mazava ho azy, amin'ny refy 153 x 76.6 x 9.8 mm dia efa nolazaiko anao fa tsy azo ampiasaina amin'ny tanana iray monja.
Ny tombony lehibe amin'ny fisian'ny efijery lehibe toy izany dia ny Moto G4 lasa safidy hijerena raha mitady a phablet toekarena. Bebe kokoa raha raisinay ny fitaovana ao aminy, izay, araka ny efa hitanao tamin'ny fandinihana horonantsary, dia hahafahantsika mankafy lalao video na atiny multimedia tsy misy olana.
Fakan-tsary aoriana 13 megapixel sensor miaraka amin'ny autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p video recording amin'ny 30fps
Fitaovana hafa Fanoherana fanoherana / rafitra fiampangana haingana
vidiny 226.91 euro any Amazon
Araka ny efa nampoizina, ny Moto G4 dia manatitra naoty amin'ny alàlan'ny fanolorany tena a Finday solventso isan'androa, zavatra andrasana aorian'ny fijerena ireo mampiavaka azy ara-teknika. Motorola dia niloka mafy tamin'ity lafiny ity, nampiditra ny iray amin'ireo vahaolana solvent indrindra an'ny Qualcomm, ny Snapdragon 617 mahery, SoC iray izay mihoatra ny fanatanterahana ny asany ary miaraka amina GPU Adreno 405 sy fahatsiarovana RAM 2 GB, avelao hifindra izay lalao rehetra amin'ny fomba tena mandeha sy miasa.
Ny tsipika manasaraka ny processeur premium indrindra amin'ireo SoC miorina amin'ny terminal eo afovoany dia mihamalefaka ary ny Herinaratra Moto G4 dia ohatra mazava amin'izany.
Ary gaga aho tamin'ny fitsapana natao tamin'ny Moto G4, izay nanolotra ahy sasany valiny mitovy amin'ny an'ny Nexus 6. Tandremo fa telefaona tsy mahatratra 250 euro no resahina.
Ny Moto G4 dia manana FM Radio ary azo ampiasaina tsy misy headphones ho antena izy, raha mbola eo amin'ny faritra avo lenta isika, zavatra tiako izany. Tsy azoko hoe mbola ahoana ny telefaona mbola eny an-tsena raha tsy misy Radio FM.
Tsy te-hanidy ity faritra ity aho raha tsy miresaka mpandahateny eo aloha ny Moto G4, izay manolotra kalitaon'ny feo tsara manasa antsika hampiasa ny efijery miavaka mba hankafizany ny atiny multimedia.
Fampisehoana mifanaraka amin'ny marika
Ny filokana Motorola dia mafy tokoa amin'ity fizarana ity amin'ny fanolorana a Efijery 5.5 inch miaraka amin'ny kalitao izay maivana taona mialoha ny mpifaninana rehetra ao aminy.
Tsy misy isalasalana fa ny mpanamboatra dia naniry ny fahatanterahan'ny mpampiasa ho tonga lafatra. Ary marina tokoa ny filokana amin'ny a Tontonana IPS mahatratra 1.920 1.080 x XNUMX teboka ary 401 teboka isaky ny santimetatra. Ny kalitaon'ny Moto G4 dia mahavariana, manome sary an-tsary tena tsara miaraka amin'ny loko voajanahary ary tsy misy saturation.
Tonga lafatra ny fotsy fotsy misy azy, izay mahatonga ny Moto G4 ho terminal tena tsara amin'ny famakiana misaotra amin'ny ampahany ny hakitroky ny pixel avo. Marihina fa amin'ny fametrahana ny famirapiratany farafaharatsiny, dia ho afaka hamaky am-pahatoniana eo am-pandriana ianao, nefa tsy hanelingelina ny jiro amin'ny efijery. zoro mijery tsara ary fifanoherana lehibe, ny haavon'ny hazavana eo amin'ny efijery Moto G4 dia manome antsika fahitana ivelany tsy misy tomika, na dia amin'ny antoandro be aza.
Tsy isalasalana fa ny efijery tsara indrindra hitako tamin'ny telefaona iray izay vidiny ambany noho ny 300 euro. Raha mitady fantsona misy efijery lehibe sy tsara kalitao ianao amin'ny vidiny mirary, ary tsy miraharaha ianao fa tsy manana sensor sensor an'ny rantsantanana io, I manome antoka fa ny Moto G4 no safidy tsara indrindra. Bebe kokoa raha raisinay ny fahaleovan-tena tsy mampino.
Bateria novaina tsara indrindra miaraka amin'ny rafitra famahana haingana
Nahazo fanamarihana avo lenta i Motorola tamin'ny fizakantenan'ny Moto G4 vaovao. ny Bateria 3.000 mAh, tsy azo esorina, mampanantena fahombiazana mihoatra ny ampy hanohanana ny lanjan'ireo finday rehetra, saingy tsy nanantena fampisehoana tena tsara aho.
Fanomezana ara-dalàna ny telefaona Nahatratra roa andro ny fampiasana ahy tsy nisy olana, zavatra nanaitra ahy nandinika ny efijery 5.5-inch misy ny vahaolana Full HD. Miresaka momba ny fampiasana marina ny fivezivezena amin'ny Internet aho, amin'ny fampiasana tambajotra sosialy, fihainoana mozika mandritra ny adiny iray isan'andro ... ny fametrahana ny telefaona amin'ny fomba fiaramanidina amin'ny alina sy ny fanidiana ny fangatahana, ny Moto G4 dia niaritra ahy tontolo andro iray hafa, tonga ny alina faharoa tamin'ny 10 -15% noho izany, manisa fa misy andro ampiasantsika ny telefaona bebe kokoa, azontsika atao ny manome azy fahaleovan-tena maharitra 42 ora, zavatra mahagaga ho an'ny telefaona manana ireo toetra ireo.
Ary koa ny Moto G4 dia mifanaraka amin'ny rafitra Qualcomm mamaly hainganaTena ratsy fa misy charger mahazatra ao anaty boaty. Na izany na tsy izany dia afaka nanandrana ny rafitra niaraka tamin'ny charger misy an'ity haitao ity aho ary ny Moto G4 dia voadona tanteraka tao anatin'ny adiny iray monja.
Moto UI, ilay interface tonga lafatra
Tsy dia misy azo lazaina ao amin'ny sehatry ny rindrambaiko Moto G4, noho ny Motorola manohy miloka amin'ny interface madio, tsy toy ny mpanamboatra hafa. Amin'izany no ahitantsika Moto UI, miorina amin'ny Android 6.0 M ary izany dia mitazona io traikefa amin'ny Pure Android izay tena tian'ny besinimaro io.
Aiza no hahitantsika fahasamihafana bebe kokoa? amin'ny Fampisehoana ambient, Rafitra fampandrenesana tena tsara an'ny Motorola izay hampiseho amintsika ny ora sy fampandrenesana amin'ny faran'ny mainty rehefa maka ny terminal. Etsy ankilany Motorola dia nampiditra andianà fihetsika tena ilaina sy intuitive. Ohatra, raha manetsiketsika kely ny Moto G4 ianao dia hovelomina ny fakantsary. Ao amin'ny famakafakana video dia ho hitanao fa mora ny manararaotra ireo safidy ireo amin'ny telefaona.
Eto isika dia miditra amin'ny iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra amin'ny terminal. Zava-dehibe hatrany ny fananan'ny telefaona fakan-tsary tsara ary ny tena izy dia ny G4 Gaga indray amin'ny fanolorana trondro tena tsara.
Ny fakantsary lehibe an'ny Moto G4 dia manana sensor an'ny 13 megapixels misy f / 2.0 aperture sy autofocus, miaraka amin'ny tselatra LED roa tonta sy maody HDR Auto izay mandeha tsara, ary koa afaka manoratra amin'ny kalitaon'ny Full HD.
Amin'ny tontolo ivelany mirehitra tsara Ny fakantsarin'i Moto G4 dia maka sary avo lenta, manolotra tonaly voajanahary sy loko miloko tena voajanahary. Mahagaga fa ny maody HDR, mavitrika amin'ny maody mandeha ho azy, dia tena miasa tsara nefa tsy mamorona saturation ny loko be loatra. Mety ho an'ireo mpampiasa te-haka sary nefa tsy manahy be loatra momba izay safidy azo kitihina.
Mazava ho azy, raha mahafantatra sary ianao dia hankafy ny mode manual hahafahanao manova ny masontsivana isan-karazany toy ny fampisehoana, ny famirapiratana, ny fifandanjana fotsy ... Raha tsy mila olana ianao dia aza manahy fa ny fakantsary fakantsary intuitive dia hamela anao haka sary haingana miaraka amina kalitao tena tsara. Na dia amin'ny fihetsika tsotra ataon'ny tananao aza dia azonao atao ny mampihetsika ny fakan-tsary haka sary haingana.
Rehefa dinihina ny elanelana misy ny Moto G4 dia azoko lazaina fa manana ny iray amin'ireo fakantsary tsara indrindra hita eo amin'ny elanelam-potoana avo lenta izy io.
Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Moto G4
Gaga be tamiko ny Motorola tamin'ny Moto G4. Nanome fiovana vaovao ny mpanamboatra tamin'ny alàlan'ny fanolorana terminal eo anelanelany - avo amin'ny vidiny tsy manam-paharoa. 229 euro ho an'ny telefaona misy efijery 5.5-inch, fahombiazana tena tsara ary ambaratonga 2 andro? Safidy vitsy kokoa no ho hitanao amin'io vidiny io.
Fitaovana mitovy amin'ny Nexus 6
Ny fakantsary Moto G4 dia manolotra fakana sary tena tsara
Tsy mampiditra charger mifanaraka amin'ny rafitra famahana haingana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Moto G4, famakafakana ary hevitra aorian'ny fampiasana iray volana
Tsy maintsy nanandrana ny moto g3 4 aho ary hafanana be daholo nefa ratsy tarehy amin'ny fakantsary fotsiny ary maka horonantsary amina fanapahan-kevitra rehetra ary natelin'izy ireo ihany koa ny bateria mahatsiravina izay tsy naharitra satria tsy nasiany soritry ny fanafanana ary tsy misy lagy raha mijaly amin'izany ianao tsy afaka mankafy ny fakantsarin'izy ireo na milalao lalao mavesatra satria be loatra ny hafanan'ny mpandrehitra azy, tso-po izy satria mandainga, manandrana azy toy ny olon-drehetra, mampiasa tsara azy io tsy amin'ny ampahafolony fotsiny ary ny hafanana tafahoatra aorian'ny 10 minitra fandraisam-peo sy ny 5 na 8 eo ho eo minitra filalaovana
pio calchin dia hoy izy:
Moto g4 plus no ampiasaiko ary tsy hafana ny marina ,,,,,,, na mihalefaka miaraka amina lohahevitra lalao ,,,,, Tsy fantatro hoe finday nanandrana ianao fa toa hitako fa ianao diso ireo hehe
mandeha tsara izy, ny ahy dia ny dian-tongotra miampy, fahatsiarovana 2 an'ny ram 32 dual sim
Mamaly an'i pio calchin
Misy mahalala ny fomba fampandehanana ny LED fampandrenesana?
NELSON GOMEZ dia hoy izy:
METY 2 volana aho miaraka amin'ny môtô G4 ary izaho dia mihoatra ny fahafaham-po, amin'ny lalao mavesatra dia milofika, CAMERA TSARA IZAO RAHA TOA TSARA I BATERA.
Valio amin'i NELSON GOMEZ
Ny Motorola Moto Z Play dia mipoitra miaraka amin'ny output jack audio 3,5mm